Nalalka nalka nalka, nalka iftiinka nalka, nalka laydhka nalka - Hannorlux
Waxaan shaqaaleynaa wadar ahaan 250 shaqaale xirfad leh. Waxaan u soo baxnaa in ka badan 600,000 oo shey bil kasta, waxaanna leenahay awood aan ku soo saarno ugu badnaan 2 milyan oo shey. Xidhiidhkeena ganacsi awgood oo dhismay 15kii sano ee la soo dhaafay, waxaan ku soo saari karnaa qalab ku saabsan baahida iibsadaha ee qiimaha tartanka.
Iyada oo ku saleysan taxanahayaga sheyga u gaarka ah, waxaan sidoo kale dhoofineynay noocyo badan oo iftiinka LED-ka, Nalalka Gudaha & Dibadda, Wax soo saarka Cadceedda, Dareemayaasha & Qaylodhaanta muddo 8 sano ah Alaabtayadu waxay ka yimaaddaan iibsadayaasha Spain, Yurub, Afrika, Aasiya, Australia iyo Ruushka. Xirfadlahayaga Exp. & Kooxaha Imp waxay ku siin doonaan adeeggayaga ugu fiican uguna xirfadda badan.
VC midab taxane VC125BK
Laser Drawing FL taxane FL2-04B
XXL Size FX taxanaha FX180GF-S
Taxane Smart FS FXS160S2
Nalalka ku jira Caagga taxanaha ah FB -G125FROST
Taxanaha VG VG125A
Nalalka ku jira Nambarka FB taxanaha Dhererka cawlan - LDS-T100-G
Taxane FE midab FXQ220P
Iftiinka iftiinka HR20517
Iftiinka iftiinka HR20516
XXL Size FX taxanaha FXS160S2
XXL Size FX taxanaha FXS200S